Wararka - Maxay Bitcoin qaali u tahay? Waa maxay isweydaarsiga Bitcoin?
Horaantii 700 sano kahor intaan Iswiidhan soo saarin waraaqaha lacagta ee ugu horeeya Yurub 1661, Shiinaha wuxuu bilaabay inuu barto sida loo yareeyo culeyska dadka sita shilimada naxaasta ah. Qadaadiicdan ayaa nolosha adkeeya: way culus tahay waxayna safarka ka dhigtaa mid khatar ah. Goor dambe, ganacsatadu waxay go’aansadeen inay lacagtan midba midka kale dhigto oo ay soo saaraan shahaadooyin waraaqo ah oo ku saleysan qiimaha lacagta qadaadiicda ah.
Soo saarista gaarka loo leeyahay waxay kicisay kororka sicir bararka iyo qiimo dhaca lacagta: dowladdu waxay raacday ku dayasho waxayna soo saartay waraaqo u gaar ah oo ay taageerayaan keyd dahab ah, taasoo ka dhigtay qandaraaskii ugu horreeyay ee sharci ee adduunka.
Qarniyadii la soo dhaafay, waddamadu waxay bilaabeen inay qaataan "heerka dahabka", iyagoo adeegsanaya badeecooyin sida dahab iyo qalin qalin shilimaad miisaankiisu gaarayo. Oo waxay u taagan tahay qiimo cayiman illaa lacagta qadaadiicda ah la faragaliyo, taas oo horseedaysa kor u kaca lacagaha wakiillada.
Bangiyadu waxay soo saaraan “bonds dahab”, taas oo ah, waraaqaha lacagta oo wajigooda lagu qiyaasay US $ 50 waxaa lagu beddeli karaa $ 50 dahab ah.
Sanadkii 1944, nidaamka Bretton Woods wuxuu go'aansaday in 44-ka dal ee kulanka ka qeyb galaya ay lacagahoodu ku sii tiirsanaan doonaan doolarka mareykanka maxaa yeelay doolarka mareykanka waxaa taageera kayd dahab ah. Tani waxay dhab ahaan ka dhigan tahay in Doolarka Mareykanka loo rogi karo dahab xilli kasta.
Tani waxay dhab ahaan ka dhigan tahay in Doolarka Mareykanka loo rogi karo dahab xilli kasta.
Saameyntu way wanaagsan tahay, laakiin muddadu ma dheera. Kordhinta deynta dadweynaha, sicir bararka lacagta, iyo kororka taban ee isu dheelitirka lacagaha waxay ka dhigan tahay in Doolarka Mareykanka uu saaran yahay cadaadis aad u weyn. Iyagoo taas ka jawaabaya, qaar ka mid ah waddammada Yurub xitaa way ka baxeen nidaamkii oo waxay ku beddeleen dollarka Maraykanka dahab. Waqtigaas, keydkooda waxaa ku jiray dollar ka badan dahabka.
1971, Madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon wuxuu xiray daaqadii dahabiga ahayd wuxuuna bedelay xaaladdan. Dawladaha shisheeye waxay hayaan dollar aad u tiro badan, Mareykankuna wuxuu u nugul yahay dahab yaraan. Iyadoo ay weheliyaan 15 la-taliyeyaal kale, waxay ku dhawaaqeen qorshe dhaqaale oo cusub si looga fogaado sicir bararka, loo yareeyo shaqo la'aanta, loona beddelo doolarka Mareykanka qandaraas sharciyeed, kaasoo inta badan ku tiirsanaa oggolaanshaha dadka isticmaala lacagta halkii ay ka ahaan lahaayeen badeecadaha iyo heerarka.
Sidaa darteed, rajadu waxay tahay in dhinacyada oo dhami ay aqbali doonaan lacagtaada, taas oo gebi ahaanba ku saleysan iimaan.
Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay Bitcoin, Cryptocurrency-kaan ayaa mar ku dhacay rikoodh sare oo ah $ 19,783.06. Maxaa siinaya qiimaha Bitcoin? Sheegashada in lagu gaadhay sahay iyo dalab uma muuqato inay daboolayso dhammaan duruufaha. Sal iyo raad midna kuma laha oo cidina ma maamusho.
Ugu yaraan, waxaad ku kalsoonaan kartaa hay'ad maareynta sharciga ah si aad u ilaaliso qiimaha lacagta.
Bitcoin waxay leedahay astaamaha lacagta sharciga ah. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego aragtida maamulka, qofna "ma leh" Bitcoin. Waxay umuuqataa inay ushaqeyso si lamid ah sida lacagta fiatka, laakiin nidaamka asal ahaan kaladuwan ayaa dhaqaalo yahanada iyo khubarada maaliyadeed waxay kadhigtaa inay ka fikiraan: yaa dhiga qiimaha?
Waxa aad aragtaa waa 5 ka mid ah malaayiin xariiqood oo koodh ah oo ku yaal Seeraar. Bitcoin waxay asal ahaan ahayd dhowr kun oo xariiq oo koodh ah, waxaa soo saaray Satoshi Nakamoto sanadkii 2008 waxaana la sii daayay horaantii 2009. Warqadda caanka ah ee caanka ah ee loo yaqaan "Bitcoin: Nidaamka Lacagta Elektaroonigga ah ee Feejignaanta" Nidaamka Lacagta Elektiroonigga ah), fikradda Bitcoin waa la sharaxay.
Fikradiisii ​​asalka ahayd waxay ahayd inuu abuuro qaab lacag caddaan ah oo aan u baahnayn inuu ka gudbo hay'adaha maaliyadeed maxaa yeelay waa la xareeyay.
Cusbooneysiinta ugu weyn waa adeegsiga tikniyoolajiyadda xannibaadda. Baloog kastaa wuxuu metelaa macaamil shabakadda Seeraar-ka dhismo badan, waa sii dheeraanayaa macaamilku. Sidaa darteed, waxay samaysatay "silsilad", markaa magaceeda.
Si loo abuuro baloog, macdan qodayaashu waxay u baahan yihiin inay adeegsadaan awoodda asalka ee kombiyuutarka iyo xaddi koronto oo badan si loo xaqiijiyo jiritaanka qiimaha X iyo macaamilka waqtiga Y ee u dhexeeya A iyo B. Markii la xaqiijiyo, balooggu wuu muuqdaa macaamilkuna wuu dhaafaa . Macdan qodayaashu waxay heleen Bitcoin abaalmarin ahaan.
Si kastaba ha noqotee, lacagtan dijitaalka ahi ma lahan qiimo u gaar ah-looma isticmaali karo badeecad ahaan. Dadka shakiga ka qaba Bitcoin badanaa waxay dhahaan in Bitcoin si ay u sii noolaato, waa in marka hore la aqbalaa loona adeegsadaa badeecadaha kale. Si tartiib ah, waqti kadib, waxay noqoneysaa lacag. Tusaale ahaan, maxaa yeelay dahabka waxaa loo isticmaalaa dahabka iyo alaabada elektarooniga ah, dadku waxay keydsadaan dahab si ay u ilaashadaan qiimahooda.
Shaqada fog ee dhaqaale yahanka reer Austria Carl Menger, wuxuu bilaabay inuu ku sifeeyo lacagta "xaqiiqda ah in badeecooyinka qaarkood ay noqdeen meel guud ahaan la aqbalay oo ah sarrifka." Iyadoo lagu saleynayo Menger, Ludwig von Mises, oo sidoo kale ah dhaqaaleyahan, wuxuu u kala saaraa lacagta badeecada lacag ahaan "sidoo kale waa badeecad ganacsi." Tartan sharciyeed waa lacag ka kooban "shey leh aqoon sharciyeed gaar ah".
“Ominal Lacagta la magac bixiyo iyo tan lacagta, oo ay ku jiraan waxyaabo leh aqoon sharci oo gaar ah…” -Ludwig von Mises Theory of Money and Credit
Fikradda ah qiimaha aasaasiga ah ayaa si qoto dheer ugu abtirsada bina-aadamka, xitaa Aristotle ayaa mar wax ka qoray sababta ay lacagtu ugu baahan tahay qiime asal ah. Asal ahaan, iyada oo aan loo eegin lacagta ay tahay, qiimaheedu waa inuu ka yimaadaa waxtarkeeda. Maaddaama taariikhdu caddaynayso in aan waxba u baahnayn qiimaha badeecadda si ay u noqdaan lacag, dooda Aristotle waa mid aan la aqbali karin.
Qeybo ka mid ah Afrika iyo Waqooyiga Ameerika, kuusha muraayadaha ayaa loo isticmaalaa lacag ahaan, in kasta oo ay caddeeyeen inay waxtar yar u yihiin badeecad ahaan. Dadka Yap ee ku nool Baasifigga waxay u isticmaalaan dhagaxa nuuradda lacag ahaan.
Dadka ka shakisan Bitcoin badanaa waxay adeegsadaan doodaha qiimaha u gaarka ah si ay u cambaareeyaan jiritaanka Seeraar. Nasiib darrose, Bitcoin waa jiritaan dijitaal ah, sidaa darteed way ka madax bannaan tahay silsiladaha dunida dhabta ah. Uma baahna inay lahaato qiime asal ahaaneed sida dahabka, umana baahna inay siiso xuquuq gaar ah kuwa kale inay ka dhigaan qandaraas sharci ah. In kasta oo tani ay umuuqato sharraxaad-Bitcoin waa nooc cusub oo aan ku xirnayn xeerarkeenna aadanaha - laakiin weli macno buuxa ma leh.
Ka fikir sidan: Bitcoin iyo lacagaha fiatku waa nidaamyo dhaqaale oo kala duwan.
Lacagta Fiat-ka waxaa iska leh dunida jir ahaaneed, taas oo keeneysa xaddidaadyo kale oo lacageed. Awoodda waxaa iska leh kuwa gacanta ku haya lacagta, bangiga dhexe wuxuu had iyo jeer daabacan karaa lacag badan si kor loogu qaado sicir bararka iyo wareegga. Si kastaba ha noqotee, cidina ma sheegi karto si sax ah inta doolar ee la taaban karo ee ku socda adduunka.
Dahabka la keenayo wuu xadidan yahay, laakiin waxaa saameyn ku yeelan doona sicir bararka. Haddii qof uu helo xaddi badan oo dahab ah oo ka baxsan inta hadda la joogo, lahaanshaha ayaa gebi ahaanba la qasi karaa. Cusbooneysiinta sayniska maaddooyinka ayaa sidoo kale yareyn kara baahida loo qabo in dahab loogu isticmaalo elektaroniga iyo alaabada macaamiisha.
Dabeecadda dhijitaalka ah ee Bitcoin waxay u baahan tahay saldhig aragtiyeed oo cusub. Dhaqaaleyahannada ayaa muddo dheer aqoonsaday xaddidaadda biraha qaaliga ah iyo lacagaha fiatka. Sidaa darteed, hordhaca Bitcoin waxay dhashay xeerar cusub, oo dad badani ugu yeeraan "nidaamka dhaqaalaha ee bilowga ah".
Dhibaatadu waxay tahay, sida Bitcoin maximizers ay kuu sheegeen, lacagta sharciga ah iyo nidaamka deegaanka ee loo yaqaan 'cryptocurrency ecosystems' si dhab ah uma wada noolaan karaan. Maaddaama aysan jirin qiimo gaar ah oo ah qalab dhaqaale, shey maalgashi ama dammaanad, sharadka ugu weyn ayaa ah in Bitcoin laga dhigo lacag caalami ah.
Maanta, keenista lacagta adduunka (M1) waa 7.6 tiriliyan oo doolarka Mareykanka ah. Haddii aad ku darto dhigaalka jeegga, curaarta muddada-gaaban, lacag dhigashada waqtiga iyo aaladaha kale ee maaliyadeed, waxay gaari doontaa $ 90 tirilyan oo fajaciso leh. Si aad u noqotid lacag caalami ah, Bitcoin waxay u baahan tahay inay lahaato ugu yaraan qiimaha lacagta adduunka la keeno-laakiin tani maahan kiiska, maxaa yeelay qiimaha suuqa ee Bitcoin waa kaliya $ 130 bilyan waqtiga qorista.
Si kastaba ha noqotee, deynta madaxbanaan ee degdegga ah iyo deynta ajnabiga ah ayaa laga yaabaa inay ku dhiirrigeliso maalgashadayaashu inay bilaabaan inay raadiyaan qalab dib-u-dejin dib-u-dejin ah oo ka sahlan helitaanka iyo beddelka dahabka. Tani waxay kobcin kartaa qiimeynta Bitcoin maxaa yeelay waxay leedahay shaqo dukaan qiimo leh. Si loola dagaallamo sicir bararka, dad badan ayaa ku qanacsan in ay qabtaan doolar, yuuro ama yeen faylalka ay ku shaqeeyaan - Argentine iyo Venezuela ayaa sidan sameeya, waxay hayaan dollar deggan oo deggan.
Tani waxay u keeni kartaa qiime wax ku ool ah: Seeraar waxaa loo isticmaali karaa bakhaar qiime leh.
Waxaan u aragnaa inay tahay hanti. Hadday sidaas tahay, markaa Bitcoin ayaa asal ahaan ah lacag ka hortagga sicir bararka. Si loo kiciyo kobaca shabakadda, mar kasta oo baloog cusub laga abuuro xannibaadda, 50 bitcoins cusub ayaa la soo saari doonaa. 210,000 oo jibbaar kasta ka dib, abaalmarinta waa la kala badin doonaa (hadda waxaa lagu abaalmarinayaa 12.5 halkii jibbaar, waxaana loo kala bar doonaa 6.25 Maajo 14, 2020). Ku lifaaqan yaraanta soo jireenka ah iyo sahayda sahayda ee 21 milyan Bitcoins, layaab malahan in dadka iyo hay'adaha maaliyadeed ay ula dhaqmi karaan Bitcoin lacag adag (sidoo kale loo yaqaan lacag aamin ah).
Tani waxay ka dhigan tahay in siyaasadda lacageed ee gudaha ay waddo awoodda wax iibsiga ee Bitcoin - laakiin maxaa go'aaminaya qiimaheeda?
Haddii aad fiiriso iskuulka caadiga ah ee dhaqaalaha, waxaad ogaan doontaa in qiimaha Seeraar lagu go'aaminayo qiimaha wax soo saarkeeda. Tan macnaheedu waa qalab iyo koronto. Maaddaama Bitcoin ay sii waddo inay ku dhacdo dhibaatada, tirada macdanta ayaa si tartiib tartiib ah u yarayn doonta sababtoo ah kharashka macdanta oo sarreeya. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira qaar ka mid ah macdan qodayaasha oo doonaya inay ku iibiyaan bitcoin qasaare, taas oo muujin karta in qof uu xayndaab u yahay kor u kaca bitcoin mustaqbalka: qiimaha kuma xirna gebi ahaanba qiimaha wax soo saarka, in kasta oo ay tahay arrin.
Iskuulka neoclassical ee cilmiga dhaqaalaha wuxuu ku balaariyay aragtidan wuxuuna ku daray qodob kale oo ujeedo leh: saad iyo dalab. Maaddaama sahayda bitcoin ay xiran tahay, tirada bitcoins-ka la soo saaray ayaa sidoo kale hoos u dhici doona waqti ka dib, sidaas darteed baahida loo qabo bitcoins badan ayaa kor u kici kara. Baahida badan waxay la mid tahay qiimaha sare.
Ku tiirsanaanta kaliya arrimaha ujeeddada umuuqata inaysan awoodin inay sawirto sawirka oo dhan. Haddii kharashka waxsoosaarku ay yihiin sababta ugu weyn, markaa qiimaha Seeraarku waa inuu ku dhowaadaa bixinta ballaaran ee Mareykanka (M3).
Iyada oo ay taasi jirto, macdan qodayaasha ayaa wali ku jira qasaare, in kasta oo kharashka badan ee macdanta Bitcoin la siinayo.
Haddii dheelitirka dalabka iyo keenista ay muhiim tahay, markaa saqafka sahayda saafiga ah ee Bitcoin ee saafiga ah, waa in la go'aamiyaa dalab deggan. Si kastaba ha noqotee, Bitcoin ayaa wali u nugul isbeddel daran waxaana laga yaabaa inay duusho oo kor u kacdo isla maalintaas.
Gelitaanka dugsiga dhaqaalaha ee Austrian, taageerayaasha Bitcoin aad ayey u jecelyihiin dugsigan. Dhaqaaleyahanada reer Austaralia waxay aamminsan yihiin in qiimaha wax waliba ay go’aamiyaan arrimo shaqsiyeed, xitaa marka lagu daro kharashyada wax soo saarka. Sahayda iyo baahida waxaa go'aamiya dookhaaga shaqsiyeed. Sidaa darteed, waxay sharxi kartaa qiimaha Bitcoin - qiimaha la dareemayo iyo arrimaha shakhsiyadeed waxay noqon karaan qaybo muhiim ah.
Waa la arki karaa in aysan jirin sharaxaad cad oo ku saabsan sababta cryptocurrency (ama xitaa lacag) ay qiimo u leedahay. Xaaladdan oo kale, qiimaha Bitcoin waxay umuuqataa inay wadaan moodello dhaqaale oo caadi ah, dareenka suuqa iyo siyaasadda lacagta gudaha.
Si kastaba ha noqotee, iyadoon loo eegin aragtida dhaqaale ee dadku qaataan, cryptocurrency wali waxay keeni doontaa kacaan dhaqaale. Haddii ay u xuubsiiban karto qaab kale oo lacagta adduunka ah, nidaamka dhaqaale ee adduunka waa la rogi doonaa (ha fiicnaado ama ha xumaado, ma ogin).
Ugu dambeyntiina, Bitcoin waa suufka bilawga ee tijaabooyinka dhaqaale. Laga soo bilaabo 2016 ilaa 2017, tiknoolajiyada xannibaadda ayaa horseeday barwaaqada cryptocurrency waxayna keeneen adduun cusub oo cusub oo hal-abuurnimada xannibaadda ah. Maanta, waxaan u adeegsan doonnaa fikradda ah biinanka hantida iyo bangiyada keydka ah si aan u baranno cryptocurrencies deggan oo joogteyn kara qiimaha hal doollar.
Halkii loola dhaqmi lahaa Bitcoin lacag ahaan, waxaa fiican in loola dhaqmo sidii nidaam lacag bixin ah.
Sidaa darteed, qiimaha dhabta ah ee Bitcoin wuxuu ku jiraa shabakadiisa. Markay dad badani ku lug yeeshaan, ayaa ka sii fiican. Asal ahaan, tani waxay ka dhigan tahay in qiimaha Bitcoin uu ku xiran yahay cidda iska leh. Maalmahan, iyada oo caan ka ah Bitcoin (maaha isticmaalka maalinlaha ah, laakiin maalgashiga iyo ganacsiga), dad badan oo xiiso badan ayaa bilaabaya inay fiiro gaar ah u yeeshaan tikniyoolajiyaddan cusub. Taas macnaheedu waa qaybinta badan.
Si kastaba ha noqotee, si Bitcoin ay si dhab ah ugu shaqeyso sidii la filayay, waxay u baahan tahay in laga takhaluso macdan qodayaasha iyo barkadaha macdanta iyadoo loo beddelayo nidaam caddeyn-u-lahaansho (PoS). Nidaamka caddeynta shaqada ee Bitcoin wuxuu macaamil ganacsi ka dhigaa mid aad qaali u ah-macdan qodayaal ayaa ku bixiya malaayiin doolar si loo xaqiijiyo macaamillada Bitcoin ee shabakadda oo leh koronto iyo awood farsameyn kumbuyuutar. Nidaamka PoS, Bitcoin ayaa lagu qiimeyn doonaa shabakadeeda darteed. Inta badan daneeyayaashu waxay ka tagi doonaan qayb ka mid ah hantidooda si ay ugu oggolaadaan shabakadda inay koraan, taas oo markaa ku kordhinaysa saamigooda saamiga.
Waxay u egtahay mid fudud, laakiin bitcoins-ka badankood maanta waxaa qodo macdanta Shiinaha. Haddii ay beddeli karto (tusaale ahaan) bixinta ballaaran ee Mareykanka, haddaba maxay dowladda Mareykanku u qaadatay lacag caalami ah oo ay maamusho macdan-qodayaasha awoodda badan leh?
Hadday quwadaha waaweyni raali ka ahayn, maxay congres-yada yaryar u raacaan? Hadafka lacageed ee adduunku wuxuu umuuqan karaa riyo tuubbo ah, laakiin aakhirka, in Bitcoin shaqeyn karto waxay ku xirnaan doontaa cidda aad ka maqasho, sida halka ay qiimaheeda ka hesho.
weelka btc, weelka bitmain, crypto macdanta asic, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka antminer-ka, weelka antbox,